Rugby - "TOP 8" Nahintsan’Ankadifotsy ny miaramila
Tsy isan’ireo hiatrika ny manasa-dalana ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny baolina lavalava ny Cosfa, izay tompondaka farany.
Nahintsan’ny US Ankadifotsy tamin’ny alalan’ny isa 21 no ho 16 ireto miaramila ireto omaly teo amin’ny andro farany ho an’ny dingan’ny fifanintsanana. Nihintsana toy izany ihany koa omaly ny US Ikopa, izay lefitry ny tompondaka farany, taorian’ny faharesena nanjo azy ireo nanoloana ny Tfma tamin’ny alalan’ny isa 21 no ho 17. Tankina tanteraka ireo mpanohana ny miaramila sy Ikopa tetsy amin’ny kianjan’i Malacam Antanimena. Ny Tam, USA, IRC ary Tfma izany no hiatrika ny dingan’ny manasa-dalana ho an’ny fifaninanam-pirenena eo amin’ity taranja ity.
Isan’ireo nizaka ny mafy kosa ny Ft Manjakaray tamin’ity lalao ity, satria ady sahala tokana tamin’ny fihaonan’izy ireo sy ny Tfma no mba hany nahitany isa. Ny sabotsy teo dia tamin’ny alalan’ny isa mavesatra 22 no ho 6 no nandavoan’ny Tam Anosibe azy ireo. Ny 3FB kosa indray dia tamin’ny farany, izay lalao nifanandrinany tamin’ny IRC vao nahita fandresena.
Madagascar : Un adieu à une étoile qui s’est éteinte.